यी दुई वर्षीय बालकले गलत पासवर्ड हान्दा ४७ वर्षका लागि लक गरिदिए आईफोन, कम्पनीले भन्यो कुनै उपाए छैन - Rochak Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २६, २०७४ समय: १२:१२:००
एजेन्सी – चीनको संघाईमा २ वर्षीय बालकले आफ्नी आमाको आईफोनमा गलत पासवर्ड हान्दा ४७ वर्षसम्का लागि लक भएको छ ।
अब यो आईफोन ४७ वर्षपछि मात्रै खुल्ने भएको छ। आमा घरमा नभएको बेलामा फोन लिएर बसेका बालकले लगातार फोनलाई अनलक गर्ने कोशिश गरेका थिए । त्यसका लागि उनले पटक पटक गलत पासवर्ड हाने । त्यसपछि यस्तो स्थिति बन्यो कि फोन ४७ वर्षका लागि लक भयो ।
फोनमा हेर्दैथिए भिडियो
एक चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको रिपोर्ट अनुसार यी बालककी आमाको नाम लू रहेको छ । लू भिडियो हेर्नका लागि आफ्नो फोन छोरालाई छाडेर बाहिर गएकी थिइन् ।
उनी जब घर फिरिन् तब उनको फोन २५ मिलियन मिनेटका लागि लक भइसकेको थियो । यो कारण भनेको बालकले फोनलाई अनलक गर्न लगातार गलत पासवर्ड हानेका थिए ।
यसरी हरेक पटक गलत पासवर्ड हान्दा फोन लामो समयका लागि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ । जति चोटी गलत पासवर्ड हानिन्छ, त्यति नै पटक फोन अनलकको समय पनि लम्बिँदै जान्छ । यो समाचार साउथ कन्कान्यूजलाई उधृत गर्दै छापिएको छ ।
अब के छ विकल्प ?
जब लू सं‌घाईको एक एप्पल स्टोरमा आफ्नो समस्या लिएर पुगिन् तब त्‍यहाँ रहेका प्राविधिकले लूलाई यो फोनमा फेरि पासवर्ड हाल्नका लागि ४७ वर्ष कुर्नुपर्ने बताए । यदि पासवर्ड हान्न ४७ वर्ष नकुर्ने भएमा फोनमा रहेका सबै डाटालाई माया मार्दै फर्म्याट गरेर रि-इन्सटल गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।
पातलो जिउडाल भएकी युवती यौनमा तिक्ष्ण
अहिले मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउ...
धेरै महिलाहरुलाई कण्डमको प्रयोग गर्न मनपर्दैन !
जान्नु आवश्यक छ कि सेक्स जहिले पनि सेफ रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि । असुरक्षति यौनका कारण समस्या धेरै आउने हु...
श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले राती साढे २ बजे पलङमुनि हेर्दा श्रीमतीको प्रेमी…
श्रीमतीसँग मस्त सुतिरहेका श्रीमान् राती साढे २ बजे पलङमुनिबाट आवाज आएपछि ब्यूँझिए । उनले पलङमुनि के रहेछ भनेर हेर्दा त्य...
यौन सम्बन्ध राखिसकेपछि किन सुत्छन् पुरुष ?
सेक्सलाई सबैभन्दा राम्रो व्यायाम पनि मानिन्छ । तर प्रायः पुरुष सेक्स सम्बन्ध राखिसकेपछि थकान महसुस गर्ने गर्छ । केही पुर...
कतै तपाईंलाई सेक्स लत लागेको त छैन !
सेक्स गर्न मन लाग्छ । महिलालाई देख्नेबित्तिकै उत्तेजना आएको महसुस हुन्छ । या अश्लील चलचित्र हेर्न मन पर्छ । यदि यसो हो भ...
सेक्सले फाइदा कस्ता कस्ता बिरामीलाई गर्छ ?
मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हु...